Inkonzo | Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.Ukuthengiswa
Kwimeko apho kuya kubakho imfuneko yokubuyisela inxenye kwinkampani yethu, le nkqubo ilandelayo kufuneka ilandelwe: Phambi kokuba zithunyelwe izinto, fumana i-RMA (Return Returns Materials Form). Inombolo ye-RMA, inkcazo yamalungu abuyayo, kunye nemiyalelo yokuthumela izinto ifakiwe kwiFom ye-RMA. Inombolo ye-RMA kufuneka ivele ngaphandle kwiphakheji yokuhambisa. Ukubuyisa ukuthunyelwa akuyi kwamkelwa ukuba inombolo ye-RMA ayibonakali ngokucacileyo.
Ukuba unemibuzo malunga nokugcinwa, iinkcukacha zobugcisa okanye ukungasebenzi kakuhle kwezixhobo, unganqikazi ukuqhagamshelana nathi ngokukhawuleza.